Xaflad aad u balaadhan oo lagu qabtay galbeedka magaalada London oo qaadhaan ururin ah oo lagu taageerayo Dhismaha Xarunta Xasan Xoog Sports Centre ee Hargeysa laga dhisayo | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Xaflad aad u balaadhan oo lagu qabtay galbeedka magaalada London oo qaadhaan ururin ah oo lagu taageerayo Dhismaha Xarunta Xasan Xoog Sports Centre ee Hargeysa laga dhisayo
Published on February 19, 2018 by sdwo · No Comments
Xaflada oo si baladhan bulshada Somaliland ee UK ay uga soo qaybgaleen habeenkii ay Axadu soo gelaysay ee 17ka February ayaa waxa ka soo qaybgalay qaybaha kala duwan ee bulshaa, waxa hadlkaasi hadalo ka jeediyey wakiilada Safaarada Somaliland ee UK Maxamed Boos iyo Yuru Qaalib, Madaxdhaqmeedyo at ka mid yahiin Ugaas Haaruun , Garaad Abdi Naasir Gaaraad, Gudoomiyha Jaaliyada SSUK Cabdilaahi – Qadaafi, asaxaab iyo dadweyne kale oo badan.
Dhamaan dadkii halkaas ka soo qaybgalay waxay si buuxda u taageereen mashruucan uu hindisay Mudawaadin Xasan Maxamed Xoore – Xasan oo xoog oo ahaan jiray ciyaaryahan can ku ah ciyaarah basketball ka. Xasan hadan waa naafo oo wuxuu saaranyahay wheelchair ka dib markii dhawrsano ka hor uu ku dhuftay xanuunka stork ga.
Xasan oo had iyo jeer dalka taga kana warhaya daruufaha dhalinayarada Somaliland ku gadaman ayaa ka damqaday ka dib markii uu arkay in dhalinyaradii gelinkii danbe wax ay ku maararoobaan anay haysan oo oo garoonadu ka kowyahiin, waxaanu sheegay in la sameeyay garoono badan oo kubada cagta ah oo lacag lagu isticmaalo taasi oo aan u wada saamaxaynin dhalinyaradii inay ka qaybqaataan ciyaarah si ay uga fogaadaan balwadaha halisata sida qaadka, daroogada iyo sigaarka. Sidoo kalena aafada uGu weyn ee Tahriibata. Waxaanu sheegay in dhalinyaradii hadii uu weydiisto lacag qaad uu ku cuno la siinayo , laakiin aan cidi siinaynin meel ay ku ciyaaraan.
Garoonka Basket ball ka ee mudwaadni xasan xoog uu ka dhisidoono Hargeysa ayaa ah qorasha habka naqshadiisa loo sameeyay mid la mid ah garoonada casiraga ahee laga dhiso caalamka. waxaana lagu qiimeeyay qarashka ku bixidoona garoonka lacag dhan hal million oo doolar. Hadaba dalka iyo dibadaba waxa muhiim ah in loo saro kaco oo laga qaybqaato sidii ay u hirgelilahayd figradan qaaliga ah ee uu hindisay Xasan oo xoog.
Xarunta ayaa loogu magacdaray Xasan Xoog Sports Centre.